October 25, 2020 – Voice of Myanmar
အောက်တိုဘာ ၂၅-၂၀၂၀ သိင်္ဂီထွန်း (VOM) ပဲခူးတိုင်းမှာ ကိုဗစ်ကူးစက်မှုမြင့်တက်နေတာကြောင့် လူစုလူဝေးနဲ့ မဲဆွယ်စည်းရုံရေးလှည့်လည်တာတွေကို မပြုလုပ်ဖို့ တိုင်းဒေသကြီးကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန၊ တိုင်းဦးစီးမှူး ဒေါက်တာရန်နိုင်မောင်က သတိပေးပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲ နီးလာတာနဲ့အတူ ပါတီအောင်နိုင်ရေး လူစုလူဝေးနဲ့လှည့်လည်ကြတာတွေကလည်း မြို့နယ်တိုင်းမှာ နေ့စဉ်ရှိလာနေတဲ့အပေါ် ခုလို သတိပေးပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ “ဒီအချိန်က ပိုးတွေ့မှုတွေများလာပြီ၊ ရောဂါကူးစက်တာလည်းသေချာတယ်။ ဒါကြောင့် ပဲခူးတိုင်းထဲမှာရှိတဲ့သူတွေအကုန်လုံး ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက ပြောထားသလိုပဲ တတ်နိုင်သမျှ အိမ်မှာနေ အပြင်မထွက်ကြနဲ့၊ မလိုအပ်ဘဲ အိမ်အပြင်ကိုမထွက်ကြပါနဲ့။ အိမ်ပြင်ထွက်ရင် လူစုလူဝေးရှောင်ပါ။ မက်စ်တပ်ပါ။ လက်ဆေးပါ။ ခပ်ဝေးဝေးနေပါ။ အဓိကက ခုလိုအချိန်မှာ လူစုလူဝေးတွေနဲ့လျှောက်သွားနေကြတာကို မလုပ်ကြပါနဲ့။ ကျနော်တို့ခနခနလည်း မေတ္တာရပ်ခံထားပါတယ်။ အဓိက ဒီအချိန်မှာ ကျန်းမာရေးက တော်တော်လေးကို အရေးကြီးနေတဲ့အချိန်ဖြစ်လို့ ဒါလေးကိုဂရုစိုက်ပေးပါ။ လူစုလူဝေးနဲ့သွားနေတာတွေကို မလုပ်ကြပါနဲ့လို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်”လို့ ဒေါက်တာရန်နိုင်မောင်ကပြောပါတယ်။ လက်ရှိ ပဲခူးတိုင်းထဲမှာ အနံ့ပျောက်တဲ့သူတွေများလာသလို ၊ အနံ့လည်းမပျောက်သလို ရောဂါလက္ခဏာလည်း…
ပါတီမိတ်ဆက် “ကျမတို့ပြောထားတဲ့ ကတိတွေလုပ်နိုင်မလုပ်နိုင်စောင့်ကြည့်ပေးနိုင်ဖို့ ကျမတို့PPPကိုမဲပေးကြပါ” ပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီအနေနဲ့ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကို ဘယ်လိုအရည်အချင်းတွေစီစစ်ပြီးရွေးချယ်တာလဲ? PPP ပါတီဟာ အင်အားကြီးပါတီတွေက ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအရေအတွက်နဲ့ယှဉ်ရင် ၅ ပုံတစ်ပုံလောက်သာရှိတာကြောင့် ဘယ်လိုအင်အားနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်မှာလဲ? လူထုဘဝအဓိကဆိုတော့ ပါတီက ချမှတ်ထားတဲ့ မူဝါဒ ၆၈ ချက်နဲ့အညီဘယ်လိုတွေ ဆောင်ရွက်ပေးမှာလဲ ? ဆိုတာတွေကို သူ့ရှေ့ဆောင်(PPP) ပါတီရဲ့ ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ ဒေါက်တာသက်သက်ခိုင် နဲ့ VOM အယ်ဒီတာချုပ် ဦးနေလင်းက ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ #VOM #VoiceofMyanmar #PPP #ပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီ #ဒေါက်တာသက်သက်ခိုင် Zawgy ပါတီမိတ္ဆက္ “က်မတို႔ေျပာထားတဲ့ ကတိေတြလုပ္ႏိုင္မလုပ္ႏိုင္ေစာင့္ၾကည့္ေပးႏိုင္ဖို႔ က်မတို႔ကိုမဲေပးၾကပါ” ျပည္သူ႔ေရွ႕ေဆာင္ပါတီအေနနဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြကို ဘယ္လိုအရည္အခ်င္းေတြစီစစ္ၿပီးေ႐ြးခ်ယ္တာလဲ? PPP ပါတီဟာ အင္အားႀကီးပါတီေတြက ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအေရအတြက္နဲ႔ယွဥ္ရင္ ၅ ပုံတစ္ပုံေလာက္သာရွိတာေၾကာင့္ ဘယ္လိုအင္အားနဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္မွာလဲ? လူထုဘဝအဓိကဆိုေတာ့ ပါတီက ခ်မွတ္ထားတဲ့ မူဝါဒ ၆၈ ခ်က္နဲ႔အညီဘယ္လိုေတြ…
အောက်တိုဘာ ၂၅-၂၀၂၀ အေးချမ်းသူ(VOM) ၂၀၂၀အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအတွက် ရှမ်းပြည်နယ်တောက်ပိုင်းမှာ မဲဆွယ်စည်းရုံးရာတွင် သျှမ်းပြည်ပြည်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ(RCSS§/SSA)အဖွဲ့ရဲ့ ခြိမ်းခြောက်မှုတွေကြောင့် အခက်အခဲရှိနေတယ်လို့ တအာင်း-ပလောင်အမျိုးသားပါတီ(TNP)ဥက္ကဋ္ဌ မိုင်းနုပ်ဟန်က VOMကိုပြောပါတယ်။ “ရွာတွေမှာ မဲဆွယ်လို့မရဘူး။ RCSS/SSAက ရွာသားတွေကိုမှာတယ်။ သူကြီးတွေကိုပြောတယ်။ TPNကို မလာစေနဲ့ မဲမထည့်ဖို့ ဖိအားတွေပေးတယ်၊ လုပ်ရင်တော့ သူတို့အကြောင်းသိမယ်ဆိုပြီးပြောတယ်။ အဲ့ဒီလိုအခက်အခဲတွေကြောင့် မဲဆွယ်လို့မရဘူး”လို့ မိုင်းနုပ်ဟန်ကပြောပါတယ်။ TNPပါတီအနေနဲ့ မိုင်းကိုင်မြို့နယ်မှာ မဲဆွယ်စည်းရုံးတဲ့အခါ ကိုဗစ်ကာလာဖြစ်နေတာနဲ့ RCSS/SSAရဲ့ ခြိမ်းခြောက်ပြောဆိုနေတာတွေကြောင့် ပါတီဝင်တွေ ကြောက်လန့်နေရတဲ့အခါ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုမပြုလုပ်ရဘူးလို့ တအာင်း-ပလောင်အမျိုးသားပါတီဥက္ကဋ္ဌ မိုင်းနုပ်ဟန်က VOMကိုပြောပါတယ်။ “ကိုယ်စားလှယ်လောင်းစာရင်းကျပြီးကတည်းက နှောင့်ယှက်ခြိမ်းခြောက်နေတာ သြဂုတ်လကတည်းကပေါ့၊ ပါတီဝင်တွေကိုခေါ်ပြောတယ် မင်းတို့TNPနဲ့အဆက်အသွယ်လုပ်ရင် မင်းတို့ ဒီထက်ဖိနှိပ်ရမယ်။ ဆိုင်းဘုတ်တွေလည်း ဖျက်သီမ်းပစ်တယ်”လို့ မိုင်းနုပ်ဟန်ကပောပါတယ်။ ၂၀၂၀အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာ မိုင်းကိုင်မြို့နယ်မပါဝင်ပေမယ့်လည်း ပြန်လည်ကျင်းပပေးဖို့တောင်းဆိုတဲ့ပါတီတွေထဲမှာ TNPပါတီမပါဝင်ရခြင်းဟာ လွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်လာမှာမဟုတ်ကြောင်းကို ယုံကြည်တာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ ပါတီဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်။ တအာင်း-ပလောင်အမျိုးသားပါတီဟာ လာမယ့်၂၀၂၀အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ပြည်နယ်(၁)(၂)နေရာတို့မှာ…
အာဖဂန်ရှိ စာသင်ကျောင်းတစ်ခုမှာ အသေခံဗုံးခွဲ ၁၈ ဦးသေဆုံး၊ ဒါဇင်များစွာ ဒဏ်ရာရ
ကဘူး၊ အောက်တိုဘာ-၂၅-၂၀၂၀ မျိုးဆက်(VOM) အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံ မြို့တော်ကဘူးရှိ စာသင်ကျောင်းတစ်ခုပြင်ပမှာ အသေခံဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် လူ ၁၈ ဦးထက်မနည်းသေဆုံးပြီး ဒါဇင်များစွာ ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့ တာဝန်ရှိသူတွေက ပြောပါတယ်။ ပေါက်ကွဲမှုဟာ အဆင့်မြင့်ပညာကျောင်းသားတွေကို သင်တန်းပေးနေတဲ့ ပုဂ္ဂလိက စာသင်ကျောင်းတစ်ခုမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီး အောက်တိုဘာ ၂၄ ရက်မွန်းလွဲပိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် လူအများအပြားကို ဆေးရုံတင်ထားရပြီး သေဆုံးသူဦးရေ တိုးမြင့်လာမှာကို စိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ ဒီတိုက်ခိုက်မှုကို နောက်ကွယ်ကနေ လုပ်ဆောင်ခဲ့တာလို့ အိုင်အက်စ်အဖွဲ့က သူတို့ရဲ့ လူမှုကွန်ရက်ကတစ်ဆင့် ထုတ်ပြန်ထားပြီး တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ သက်သေအထောက်အထားတွေကိုတော့ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာမရှိပါဘူး။ တာလီဘန်အဖွဲ့ကတော့ ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာ ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းမရှိဘူးလို့ အစောပိုင်းကတည်းက ငြင်းဆိုထားပါတယ်။ အသေခံဗုံးခွဲသမားဟာ စာသင်ကျောင်းအတွင်းထိ ဝင်ရောက်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့တယ်လို့ အာဖဂန် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လုံခြုံရေးတွေက သူ့ကို သတိထားမိသွားတာကြောင့် စာသင်ကျောင်းပြင်ပမှာဘဲ သယ်ဆောင်လာတဲ့ ဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းတွေကို အသေခံဖောက်ခွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Ref: BBC…
အောက်တိုဘာ ၂၅-၂၀၂၀ သိင်္ဂီထွန်း(VOM) တနင်္သာရီမြို့နယ်ထဲက ကျေးရွာတစ်ရွာမှာ ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့ အားလုံးဆောင်ရွက်ထားပေမယ့်လည်း ကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်းကြောင့် ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းအဆင်မပြေတဲ့အတွက် ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်ခြင်းမရှိတော့ဘူးလို့ တိုင်းဒေသကြီး ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ အတွင်းရေးမှူး ဦးထိန်လင်းဦးကပြောပါတယ်။ ခုလို ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့ မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အခြေအနေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဆီကလည်း ခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီးဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ “ အဲ့ဒီရွာရဲ့ လူမှုစီးပွားအခြေခံကိစ္စတွေကို သူတို့က ယိုးဒယားဘက်ပဲဆင်းလုပ်ကြတာ။အဲ့ဒီမှာက မဲရုံတစ်ရုံထဲရှိတာ။ အဲ့ဒီရွာက သွားချင်လာချင်ရင် ယိုးဒယားဘက်ကို မောတောင်ဆိုတဲ့ border passရှိတဲ့ အဲ့ဒီဘက်ကထွက်ရတယ်။ အဲ့ဒီကနေထွက်ပြီးတော့မှ ယိုးဒယားနိုင်ငံထဲသွားရတယ်၊ သွားပြီးတော့မှ အဲ့ဒီရွာဘက်ကိုသွားရတယ်။ အဲ့ဒီတော့ ပထမအကြိမ်မဲစာရင်းကြေငြာခဲ့တုန်းက ယိုးဒယားထဲကနေ သွားလာခဲ့ရတယ်။ အခုယိုးဒယားက ကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်းမှာပိတ်ထားလိုက်တော့ အဲ့ဒီကိစ္စတွေက သွားဖို့လာဖို့က အဆင်မပြေတော့ဘူး။ အဓိက သွားလာဆက်သွယ်ရေးအရပေါ့”လို့ ဦးထိန်လင်းဦးကပြောပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပတော့တဲ့ ကျေးရွာဟာ တနင်္သာရီမြို့နယ်ထဲက အေးမွန်သာရွာဖြစ်ပြီး အဲ့ဒီရွာမှာ ဆန္ဒမဲပေးခွင့်ရှိသူပေါင်း ၇၀၀ ကျော်ရှိတဲ့အပြင် ဆန္ဒမဲပေးခွင့်ရှိသူစာရင်းတွေကိုလည်း ကြေငြာထားပြီးသားရွာဖြစ်တယ်လို့…
ပါတီမဲဆွယ်ရေးအဖွဲ့နဲ့ ဆိုင်ကယ်ချင်းတိုက်မိချိန် ဆဲဆိုခဲ့တဲ့သူကို သံတူရွင်းနဲ့ရိုက်သတ်
အောက်တိုဘာ၂၅-၂၀၂၀ ကောင်းလက်ျာ(VOM) ‌ပဲခူးတိုင်း၊ တောင်ငူမြို့နယ်၊ ကြူအင်‌းကျေးရွာမှာ မနေ့အောက်တိုဘာ၂၄ ရက် ညနေပိုင်းက ပါတီမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးနဲ့ ဆိုင်ကယ်ချင်းတိုက်မိချိန် ဆဲဆိုခဲ့သူတစ်ဦး ကို ဆဲဆိုခံရသူက သံတူရွင်းနဲ့ စောင့်ဆိုင်းရိုက်သတ်ပြီး ထွက်ပြေး‌နေတယ်လို့ တောင်ငူမြို့နယ် အမှတ်(၂)နယ်မြေရဲစခန်းမှူး ရဲအုပ်စိုးသက်မောင်က ပြောပါတယ်။ ” စုံစမ်းသိရှိရသလောက် မနက်ပိုင်းက မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးအဖွဲ့နဲ့ဆိုင်ကယ်ချင်းတိုက်မိတုန်းက ဆဲဆိုခဲ့တဲ့လူကို ရွာကဖြတ်သွားချိန် စောင့်ရိုက်တာပါ။ တရားခံက ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သွားလို့ လိုက်လံစုံစမ်းရှာဖွေနေပါတယ်”လို့ ရဲအုပ်စိုးသက်မောင်ကပြောပါတယ်။ အခင်းဖြစ်တဲ့မနက်ပိုင်းက တောင်ငူမြို့နယ်NLDပါတီ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးအဖွဲ့မှ ရပ်ကျေးအဆင့်ဥက္ကဋ္ဌတစ်ဦးမောင်းလာပြီး အမျိုးသမီးတစ်ဦးလိုက်ပါလာတဲ့ ဆိုင်ကယ်ကို မြပင်ကူးရွာနားမှာ ကြူအင်းဒေသခံ ဇော်ထိုက်ဆိုသူမောင်းလာတဲ့ ဆိုင်ကယ်က နောက်ကနေ ဝင်တိုက်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ NLD ပါတီစည်းရုံးရေးအဖွဲ့မှ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးလုပ်ငန်းတွေ လုပ်ကိုင်ပြီး ပြန်သွားချိန် ညနေ၃ နာရီကျော်ခန့်မှာ တောင်ငူမြို့နယ်အနောက်နတ်စင်ကုန်းကျေးရွာနေသူ ဦး ထွန်းနောင်တစ်ဦးတည်းဆိုင်ကယ်ကို မောင်းလာချိန် ကြူအင်းကျေးရွာအနောက်ပိုင်း ကုန်စုံဆိုင်တစ်ဆိုင်ရှေ့မှာ ဇော်ထိုက်ဆိုသူက သံတူရွင်းနဲ့ရိုက်သတ် ထွက်ပြေးသွားတာဖြစ်တယ်လို့…
မြစ်ကြီးနားကာဝင်းမှာ ဝင်ထွက်နေတဲ့ မော်တော်ယာဉ်တွေ စည်းကမ်းလိုက်နာမှု အားနည်း မြစ်ကြီးနား၊ အောက်တိုဘာ- ၂၄- ၂၀၂၀ ရန်အောင်ထွန်း(VOM) မြစ်ကြီးနားမြို့ကားဝင်းအတွင်းမှာ ဝင်ထွက်နေတဲ့ ယာဉ်တွေနဲ့ ယာဉ်မောင်းအများစုဟာ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ စည်းကမ်းတွေကို မလိုက်နာကြဘူးလို့ မြစ်ဖျားဧရာကားဝင်း အတွင်း တာဝန်ကျနေတဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းရဲ့ ပြောကြာချက်အရ သိရပါတယ်။ Covid-19 ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်နေတဲ့ ကာလအတွင်း ကုန်စည်စီးဆင်မှု ရပ်တန့်မသွားအောင် တိုင်းကျော်နယ်ကျော်ဒေသကို ကုန်စည်နဲ့ထွက်မယ့် ကားတွေနဲ့ ပြည်နယ်အတွင်း လူစီးကားတွေကို ကားအသင်းရဲ့ထောက်ခံချက်၊ မော်တော်ယာဉ်များကြီးကြပ်ရေး ကော်မတီ (ယကတ)ရဲ့ ထောက်ခံချက်နဲ့ လိုက်ပါမယ့် ယာဉ်မောင်းနဲ့ ယာဉ်အကူရဲ့ ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက် ဝင်ထွက်သွားလာခွင့်ပြုပေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ရက်ကို ကားအစီးရေ ၃၀ လောက်ဝင်နေပြီး ဗန်းမော်၊ တနိုင်း၊ ပူတာအို၊ မိုးကောင်း နဲ့ အင်းတော်ကြီး ဒေသက ကားတွေအများဆုံး ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှု ပြုလုပ်ပေးနေရတယ်လို့ မြစ်ဖျားဧရာကားဝင်း…